8 Sea, 2021
Yekumhanyisa yekudzora kazhinji iri nyore chidimbu chemuchina. Ichi chingori chitima chegiya pakati pemotokari nemuchina uyo unowanzo shandiswa kudzikisira kumhanya kunoendeswa simba. Yekumhanyisa yekudzora, inozivikanwawo seye giya rinodzora, iri michina gadget uye yakakura inoshandiswa kazhinji kazhinji zvinangwa zviviri.
Iko kushandiswa kwakakosha kwechigadzirwa chemuchina ichi kudzokorora chiyero che torque inogadzirwa neruzivo simba sosi yekuwedzera chiyero chebasa rinoshandiswa. Izvo zvakanaka kuti uwane nyanzvi inogadzira magiya uye magiya uye magadziriso ekumhanyisa kuwana chigadzirwa chemhando yepamusoro. Pazasi, ini ndichaenda kugovana zvimwe zvinhu zvakakosha nezvevamhanyisa ekuderedza zvaunofanira kuziva.
1. Zvishandiso zveSpeed ​​Reducers
Vanomhanyisa kumhanyisa vanowanzo shandiswa kushandisa akasiyana marudzi emaindasitiri uye epamba michina inoda kudzikamisa kumhanya kwemagetsi magetsi nemazvo uye zvakachengeteka. Inobatsira kugadzirisa kumhanya kwemota yekupa torque inodiwa nemuchina kuti ushande zvakanaka.
Sezvo chirongwa chekutapurirana, vanomira kunze nekuda kwekuoma kwavo, iine huwandu hwakawanda hwekumhanyisa masisitimu anowanikwa zvichienderana nezvinodiwa uye zvakare maratidziro echishandiso.
2.Zvinhu Zvinonyora Yekumhanyisa Reducer
Kune zvimwe zvinhu zvinonyora zvinodzora zvekumhanya, zvinosanganisira:
Iri isimba rinotenderera rinoratidzwa mumayuniti ekirogiramu pamamita, Newton pamamita, kana mapaundi patsoka. Kana torque ikasanganiswa nenguva yekuuraya, ipapo inoshanduka kuita simba.
Motokari yemagetsi inouya nechisimba chakatsanangurwa muHP. Iyo zvakare ine yekumhanyisa yekumhanyisa yeinobuda shaft. Ese maviri maitiro emagetsi emagetsi, simba, uye kumhanya, anotsanangura torque iyo yaanogona kupa. Uye toque inobatsira kuona kana mutoro uchizotendeuka kana kwete.
Iyo yekufambisa mashandiro uye inoumbwa ne seti yemamakaniki zvinhu zvinopa chaiyo kumhanyisa kudzikisira uye zvakare inowedzera torque kutapurirana. Zvinhu zvese zvechinhu ichi zvakakosha. Inoda geometry yakakwana uye kuumbwa kwekushanda kwakakodzera kwesisitimu.
3. Speed ​​Kuderedza Dhizaini
Usati waongorora mukati mamadhisheni ekumhanyisa anoderedza dhizaini, iwe unofanirwa kuziva nezve izvo zvinhu zvebasa izvo zvinonongedzera kune iyo mamiriro anowanzo bata kana kuwedzera masimba emagetsi egearbox. Inogona kunge iine chekuita neguruva uye hunyoro hwehukama, huwandu hwekudengenyeka kuti utsungirire, kana huwandu hweanoshanda maitiro. Kuderedza pesvedzero yeiyo sevhisi chinhu mhedzisiro yekuve neruzivo rwakadzama rwekushanda kwemukati kweyekudzora uye zvakare kusimudzira dhizaini yayo yese yekufambisa nzira.
Izvi ndizvo zvimwe zvinhu zvakakosha zvaunofanira kuziva nezve vanodzora kumhanya. Iwe unogona kuwana imwe yevatungamiriri vanogadzira yekumhanyisa kudzora, honye giya rinodzora, helical giya, tarakita giya, zvekurima magiya mabhokisi, uye vamwe vazhinji kuti vatenge zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo inodhura.